WAAYAHA QALLINKAYGA! | Where Education Talks
WAAYAHA QALLINKAYGA!	October 10, 2009
Filed under: Uncategorized — aqoonkaab @ 9:05 pm WAAYAHA QALLINKAYGA!
Tan iyo maalintii aan garaadsaday, waxa aan ku foognaa diyaarinta iyo curinta qormo, suugaan, sheeko xariiro, amaba filim aan ku soo bandhigayay, kolba waxii, war iyo wacaal, maalintaas, bulshada igaga soo duxa.
Habeenku wuxu ii ahaan jiray mid aan is mirto oo dareen la ledi waayo. Waxaan xasuustaa caruurnimadii, qallin-leefta igu la barbaartay malcaamadda, waxay tubnaan jireen hareerahayga iyaga oo maararrow la hubo ugu soo hagaagayay afkayga oo ku maaweeliya kolba dhacdo iga fil weyn oo aan ka soo bowsado waayeelka ama aan ka soo xigto caweysinka ardaaga gadhmadoobaaga. Dugsigii hoose iyo kii dhexeba, waxaan u taagnaa oo talo iigu dhammayd dedaal iyo dardar gelinta qallinkayga ilaa aan ka noqday tifaftiraha “Codkii Ardayga” oo bishiiba hal mar ku dhegganaa derbiga loo maro illinka iskuulka.
Beryo ka dib, Dugsiga Sare ee Shiikh oo ahaa hoy looga arooro aqoon aan madhaxeeda la laasan karayn, waxaan labo sannadood ku mintidayay sidii aan qallinkayga ugu hubsan lahaa dareenka hoose ee ardayga. Lib ii soo hoyotay oo ku xardhan xusuus-dhiggayga waxaa ahaaday markii aan haf la idhi magac-dhabiddii aan hiigsanayay, Tifaftiraha Wargeyska “The Wall Paper”. waxaan xanbaartay kedeedka qallin la sugayo oo aan marnaba lagu hungoobayn. Balse labadii sannadood ee danbe oo aan xilkaas hayay waxay aniga igu mareen xawliga hillaaca. Toddobaadkiiba mar ayaan si baahsan warsidaha ugu soo bandhigi jiray madalsha dhigaalka (maktabadda) oo ahayd xuddunta kulanka ardayda iyaga oo ka waraaba, missana ka rakaadta kolba baahidooda waxbarasho oo subax kasta weji cusub lahayd.
Haddii aan aqoon dhiggasho sare u tegay dal qalaad, iyo haddii danto i gayeysiisay in aan qurbe u foofo, xoogsiga iyo hawl kasta oo aan hayey waxa iigu lammaanaa mudnaanta saaxafadda oo aniga iyo qallinkayga u ahayd yididiilo iyo wehel aan la´aantiis aanan noolaan karayn.
Ogaaday oo waxaan u nool ahay in aan wax qoro, waxaanna ku nool ahay waxii aan qoro. Waxaan nacay midabka cad ee kaffanta oo maalinba qof aan jeclahay lagu sii walwaalayo, anigana i sugaysa. Waxaan la coloobay barafka cad ee ku dulhaadhan buuraha dhul shisheeye aniga oo xusuustayda ku asteeyay mullaax laga duubay Buuraha Calmadow, Daalo, shibibiris iyo buuralayda Gollis. Waxaan ka dhiidhiyaa xaashida cad oo waxii lagu dhigi lahaa lagu cabudhiyry dareen naf wax curin lahayd. Sidaa awgeed, ciiltir, haqabbax iyo xasilooni, intaba, waxa aan marti uga ahay kahdka madow ee ka soo burqada qallinkayga.
Imminka iyo (Hargeysa), bisha cusb ee u bilatay Somaliland, waxay u shubatay madaxbannaanida weedhdha oo aragtidayda u ah arrinta jiddaysay in bulshadu kala badbaaddo. “An wada hadalno waa an heshiinno”. Qallinkaygana waxa sharaf u ahayd in uu saamayn ku yeesho nabadda iyo horumarinta carrigan oo si hagar la´aan ah dib loogu yagleelayo. “Xaawa iyo Aadan”, “Allif la Kordhabay”, “Toobiyaha Toosan” iyo “Madalsha Aqoonyahanka”, waxay ka mid ahaayeen curinta aan ku xardhay bogagga warbaahinta dalka ee dhigmo, maqal iyo muuqaalba si ay u badhitaarto hayaanka iyo geeddi socodka nabadeed ee dalka. Bahda warbaahintu waxay cagaha iigu hubsadeen fiinta ugu sarreysa warfaafinta dalka, aniga oo dhinacyadeeda maamul iyo curinba ka soo qabtay xilalka ugu xurmo iyo xeelad badan.
Hase ahaatee, adeeggaas aan soo tibaaxay oo igu qaatay muddo dheer (tirade waa la qarin) waxa uu dareenkayga ka raariday in la gaadhay xilligii aan ka digo rogan lahaa, oo ugu yaraan in muddo ah uga xadhig furan lahaa saxaafadda. Yeellay oo waxaan holliyay hawlaha ku kooban maamulka. Allaylahe cosob raacay oo waxaan salka qotomiyay fadhiisin dadku naruuro iyo rayrayn u arkayeen. Calaf-baa adeegay, waxanna ku biiray Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo aad loogu hanweynaa balse hadda ku caddaaday baro laga ducaysto oo qof kastoo waxgarad ah uu ka nabaadiino xidho.
“Nin anbaday halkuu aaday way u la ekoonayde”, hadda uun ayaan ka soo miiraabay dingaraarodii igaga dhacday jillafo aan anigu isku tabceeyey. Qoomaha dhafoorkayga ku yaalla oo aan cidna loo eersanayn, waxaa ka warcelinaya dareenkayga oo ku guuxaya “Gojoxo geel, wax gunti la geliyo ka weyn”. Run ahaantii, waxaan boqno gooyay dareen aan xakame iyo jare midna qabanayn. Waxaanna marti ka noqday duni igu cusub oo laga aamusan yahay, afkana laga xidhto wax kasta oo naftii madax bannaani ku naaloon lahayd. Waxaan badhtamaha u galay bulsho qof waliba keli u taagan yahay oo taladu ku kooban tahay kolba danta qofeed ee maalintaas. Danlaawe iyo yasmo waxaad ku mudanaysaa haddii aad u addeegto ama u gargaarto ciddii aan ka ahayn lafahaaga.
Bahda saxaafadda waxaan ka bartay xog kasta oo aad haysid in aanad ku qancin si aad u sii haybiso war dheeraad ah. Hadda se, waxaan u jeedaa duni qofku ku qalaljisto inta yar oo uu yaqaanno, kana xishoodo baadi goobka inta badan oo uu gabay. Waxaan gundhada u fadhiistay ceel mugdi ah oo hinbiriirsi looga dhaansado. Hubaal, waxaan wadaamo figlaynayaa waa ajjo lagu biiroodo. Waxan dareemayaa dayro iyo in la ii dacarraynayo ajjada mar haddii gacan hadimo kolba gufeynayso meel kasta oo iftiin iyo maaxi ceelka uga soo geli karaan.
“War Dhafoor Buu Ku Yaallaa.” Muddo yar oo dibedyaal iyo fallaago aan ka ahaa warbaahinta, durba, waxa igu dhacay maddane, dhafoor iyo foolba, igu sumtay cimri degdeg. Ha ahaatee, dulucdu waa aniga oo markan aqoonsaday in mihnadda saxaafaddu ii xil qarinaysay. Sida la og yahay qofku inta uu ku dhex jiro, maan iyo muuqaalba, saxaafaddu waxa ay ku hakisaa dhallinyaranimo joogta ah.
Habeennadii madowbaa ee aan ka dhaxay warbaahinta, waxaan ka ogaaday qiimahii akhristayaashayda, dhegayste iyo daawade intaba. Imminka, mar haddii aan ka soo miraabayo talo xumadii ii horseeday habowga, la arkee in aan ka soo doogo haffasho iyo mawlkan aan laga gayoon karayn ee ka baxsan degel fadhigii qallinka. Tashaday oo waxaan ku joogaa raadkii guryo noqoshada si aan ula soo noqdo xorriyaddii, rayrayntii iyo qadarintii aan ku lahaa bahda saxaafadda iyo bulshada kullaalaysa durdurrada warbaahineed. Qormadanna waxay ergo ka tahay ladqabasho waayeel gogoshiisa habeenno uga dhaxay is moodsiis. Malahayga ma qubane waa janjeedhsatay.